Nzira yekudzivirira sei maInjini ekutsvaga kubva kuIncing WordPress? Martech Zone
Mugovera, January 23, 2021 Chipiri, August 24, 2021 Douglas Karr
Zvinoita kunge wechipiri mutengi watinaye ane WordPress saiti kana blog. Isu tinoita toni yekuvandudza kwetsika uye dhizaini paWordPress - zvese kubva kuvaka plugins kumakambani kugadzira vhidhiyo yekushambadzira application uchishandisa Amazon gore masevhisi. WordPress haigare iri mhinduro kwayo, asi inoshanduka-shanduka uye isu takanaka pazviri.
Nguva zhinji, isu tinoratidzira saiti kuitira kuti vatengi vedu vatarise uye vaongorore basa tisati tariisa rararama. Dzimwe nguva isu tinotopinza zvirimo zvemutengi izvozvi kuti tikwanise kushanda pane chaiyo saiti ine mhenyu zvemukati. Hatidi kuti Google ivhiringike kuti ndeipi saiti iri zvechokwadi saiti, saka isu mwoyo injini dzekutsvaga kubva kunongedzera saiti uchishandisa nzira yakajairwa.
Maitiro Ekudzivirira Ekutsvaga Injini Mune WordPress
Ramba uchifunga kuti misa inogona kunge yakasimba izwi. Pane nzira dzekuvhara injini yekutsvaga kubva mukuwana yako saiti ... asi izvo zvatiri kuita pano ndezvekungovakumbira kuti varege kunongedza saiti mune yavo yekutsvaga mhinduro.
Kuti uite izvi mukati meWordPress zviri nyore. Mu Zvirongwa> Kuverenga menyu, unogona kungotarisa bhokisi:
Maitiro Ekuvharira Ekutsvaga Injini Uchishandisa Robots.txt
Pamusoro pezvo, kana iwe uchikwanisa kuwana pamudzi dhairekitori saiti yako iri mukati, iwe unogona zvakare gadzirisa marobhoti ako.txt faira ku:
Mushandisi-mumiriri: * Usarega: /
Iwo marobhoti.txt modification achanyatso shandira chero webhusaiti. Zvekare, kana iwe uri kushandisa WordPress, iyo Rank Math Masvomhu Plugin inogonesa iko kugona kumutsiridza yako Robots.txt faira zvakananga kuburikidza neiyo interface ... izvo zviri nyore nyore pane kuyedza FTP kupinda yako saiti uye kugadzirisa iyo faira pachako.
Kana iwe urikugadzira chishandiso chisina kupera, kugadzira software pane imwe duraini kana subdomain, kana kugadzira duplicate saiti nekuda kwechimwe chikonzero - zvakanaka kudzivirira injini dzekutsvaga kubva kunongedzera saiti yako uye kutora vanoshandisa injini dzekutsvaga kunzvimbo isiri iyo!
Tags: block bingblock duckduckgobvisa injini dzekutsvagachinzvimbo chemasvomhu seo pluginRobots.txtWordPressWordpress kuverenga marongeroWordpress marongero